Waxaan fashilinay isku day Al-Shabaab ay maxaabiis kaga furan rabeen Xabsiga Magaalada Baladweyne – STAR FM SOMALIA
Taliska Ciidanka Asluubta ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay fashiliyeen isku day Al-Shabaab ku doonayeen inay maxaaabiis ku furtaan, kadib markii habeen hore ay weerar ku soo qaadeen Xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyn.
Weerarkan oo socday muddo ayaa ilaaladii xabsiga dhexe ay iska caabiyeen raggii hubeysnaa ee xabsiga soo weeraray.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Asluubta Gobolka Hiiraan Cali Cabdulle ayaa sheegay weerarkii Al-Shabaab habeen hore ku soo qaadeen xabsiga magaalada Beledweyn uu ahaa mid ay ku doonayeen inay maxaabiis ku furtaan, balse aanay u suura gelin.
“Waxay doonayeen in maxaabiis xabsiga ku jirta xabsiga ay si xoog ah ku furtaan, balse uma suura gelin, waana laga hor-tagay”ayuu yiri Taliye kuxigeenka Ciidamada Asluubta.
Ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa markii dambe u gurmaday ciidamadii ilaalada ka ahaa xabsiga.
Xabsiga dhexe ee Gobolka Hiiraan waxaa ku xiran maxaabiis dhowr ah oo ay ku jiraan rag lagu tuhmayo inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin.